editing - Synonyms of editing | Antonyms of editing | Definition of editing | Example of editing | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for editing
Top 30 analogous words or synonyms for editing
သတင်းပညာနှင့် သတင်းစာ သတင်းပညာ (Journalism) ဆိုသည်မှာ ခေတ်စနစ်တို့၏ အဖြစ်အပျက် အကြောင်းချင်းရာများကို ပြည်သူများ သိရှိနားလည်စေရန် ကျယ်ပြန့်သောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စူစမ်းရှာဖွေလေ့လာ ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ တစ်ဆင့်ပြန်ရေးသား တင်ပြခြင်းပညာကို ခေါ်ဆိုသည်။ သတင်းပညာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖွင့်ဆိုချက်အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော် အားလုံးလက်ခံထားကြသည့် စံတစ်ခုမှာ ပြည်သူကို အသိပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုခေတ်တွင် တိုးချဲ့ပြီး ပြန်ကြားပေးရန်၊ ဖျော်ဖြေပေးရန်၊ ပညာပေးရန်ဟူ၍ ဖွင့်ဆိုလာကြသည်။ သတင်းပညာလုပ်ငန်းတွင် သတင်းတည်းဖြတ်ခြင်းပညာ (editing) ၊ သတင်းဓာတ်ပုံပညာ (photojournalism) နှင့် ဖြစ်ရပ်မှန် သတင်းရေးသားခြင်းပညာ (documentary) တို့လည်းပါဝင်သည်။
သတင်းမီဒီယာ သတင်းပညာ (Journalism) ဆိုသည်မှာ ခေတ်စနစ်တို့၏ အဖြစ်အပျက် အကြောင်းချင်းရာများကို ပြည်သူများ သိရှိနားလည် စေရန် ကျယ်ပြန့်သောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စူစမ်းရှာဖွေလေ့လာ ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ တစ်ဆင့်ပြန်ရေးသားတင်ပြခြင်းပညာကို ခေါ်ဆို သည်။ သတင်းပညာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖွင့်ဆိုချက်အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါ သည်။ သို့သော် အားလုံးလက်ခံထားကြသည့် စံတစ်ခုမှာ ပြည်သူ ကို အသိပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုခေတ်တွင် တိုးချဲ့ပြီး ပြန်ကြား ပေးရန်၊ ဖျော်ဖြေပေးရန်၊ ပညာပေးရန်ဟူ၍ ဖွင့်ဆိုလာကြသည်။ သတင်းပညာလုပ်ငန်းတွင် သတင်းတည်းဖြတ်ခြင်းပညာ (editing) ၊ သတင်းဓာတ်ပုံပညာ (photojournalism) နှင့် ဖြစ်ရပ်မှန် သတင်းရေးသားခြင်းပညာ (documentary) တို့လည်းပါဝင်သည်။
ဂျင်မီဝေးလ်စ် In late 2005, Wales edited his own biographical entry on the English Wikipedia. Writer Rogers Cadenhead drew attention to logs showing that in his edits to the page, Wales had removed references to Sanger as the co-founder of Wikipedia. Sanger commented that "having seen edits like this, it does seem that Jimmy is attempting to rewrite history. But this isafutile process because in our brave new world of transparent activity and maximum communication, the truth will out." Wales was also observed to have modified references to Bomis inaway that was characterized as downplaying the sexual nature of some of his former company's products. In an article in the July 31, 2006, issue of "The New Yorker" magazine, Stacy Schiff expanded on this topic, stating that Wales was "caught airbrushing his Wikipedia entry—eighteen times in the past year" and that he was "sensitive about references to the porn traffic on his Web portal". In both cases, Wales argued that his modifications were solely intended to improve the accuracy of the content. He apologized for editing his own biography,apractice generally frowned upon at Wikipedia. Wales said in the "Wired" interview, "People should not do it, including me. I wish I had not done it."